Ilaah: saddex ilaah? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Caqiidada masiixiga ma waxay leedahay seddex ilaah baa jira?
Qaarkood waxay si qalad ah u qaataan in Doctrine-ka Saddexda [Saddexda Maskaxnimada) ay barato in saddex ilaah ay jiraan markay adeegsanayaan ereyga "qof". Waxay yiraahdaan waxa soo socda: Haddii Ilaah, Aabbuhu runtii yahay "qof", markaa isagu waa Ilaah naftiisa (maxaa yeelay waxay leedahay astaamaha ilaahnimadiisa). Wuxuu u tirin lahaa inuu yahay "hal" Ilaah. Isku mid baa laga dhihi karaa Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Marka waxaa jiri lahaa seddex ilaah oo kaladuwan.
Tani waa fikrad khaldan oo caadi ah oo ku saabsan fikirka Saddexanka. Runtii, caqiidada masiixiga dhab ahaan ma sheeganayso midkoodna Aabbaha, Wiilka ama Ruuxa Quduuska ah mid walbaa inuu buuxiyo dabeecadda Ilaah oo buuxda. Kama khilaafi karno tritheism-ka Saddexanka. Waxa uu Saddex-jinni ka sheegayo Ilaah waa in Ilaah mid yahay dabeecadda, laakiin saddex marka loo eego kala duwanaanta gudaha ee dabeecaddaas. Aqoonyahan Christian ah Emery Bancroft wuxuu ku hayaa buugiisa Christian Theology ("Fiqiga masiixiga"), bogga 87-88, sida soo socota:
" Aabaha oo kuwan oo kale ma aha Ilaah; maxaa yeelay Ilaah ma aha Aabbaha keliya, laakiin sidoo kale waa Wiil iyo Ruuxa Quduuska ah. Ereyga aabaha wuxuu calaamad u yahay farqiga u gaarka ah dabeecadda rabbaaniga ah, taas oo Ilaah ku xiran yahay Wiilka iyo xagga Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah kaniisadda.
Wiilka oo kuwan oo kale ma aha Ilaah; waayo, Ilaah wiil ma aha, ee waa aabbe iyo Ruuxa Quduuska ah. Wiilku wuxuu astaan ​​u yahay kala duwanaanshaha dabeecadda rabbaaniga ah oo Eebbe la xidhiidho Aabaha oo uu Aabbaha u soo diray si uu dunida u furto, oo isagu Aabbaha ku soo diray Ruuxa Quduuska ah.
Ruuxa Quduuska ah oo kuwan oo kale ma aha Ilaah; maxaa yeelay, Ilaah kaliya maahan Ruuxa Quduuska ah, laakiin sidoo kale aabbe iyo wiil. Ruuxa Quduuska ahi wuxuu astaan ​​u yahay kala duwanaanshaha dabeecadda rabbaaniga ah ee Ilaah la xiriirta Aabaha iyo Wiilka, oo loo soo diray inay ku dhammaystiraan howsha cusboonaysiinta kuwa aan cibaadada lahayn iyo inay Kaniisadda quduus ka dhigaan.
Markaan isku dayeyno inaan fahamno caqiidada masiixiga, waa inaan aad uga taxadarnaa sida aan u isticmaalno oo aan u fahamno ereyga "Ilaah". Tusaale ahaan, waxkastoo Axdiga Cusub uu ka sheegayo midnimada Ilaah, wuxuu sidoo kale kala duwanaansho u dhexeeyaa Ciise Masiix iyo Ilaaha Aabbaha ah. Markan, qaaciddada Bancroft ee kor ku xusan waa mid caawineysa. Si aan u noqonno mid sax ah, waa inaan ka hadalnaa "Ilaaha Aabbaha ah", "Wiilka Ilaah" iyo "Ilaah oo ah Ruuxa Quduuska ah" marka aan tixraacno wax kasta oo "hypostasis" ama "qof" ah oo ah Ilaaha Qaadirka ah.
Xaqiiqdi waa sharci in laga hadlo "xadidaada", in la isbarbardhigo tilmaamaha ama in la isku dayo in si kale loo fasiro dabeecadda Eebbe. Dhibaatadan waxaa si fiican u fahmaya culimada masiixiga. Maqaalkiisa Maaddada 'The Point of Trinitarian Theology' ("The point of theology ofology", 1988, Toronto Journal of Theology), ayuu yidhi Roger Haight, oo ah borofisar wax ka dhiga iskuulada fiqiga ee Toronto, cilmiga xaddidan. Wuxuu si furan u qirtay qaar ka mid ah dhibaatooyinka ka jira fiqiga Trinity, laakiin wuxuu sidoo kale sharaxayaa sida Saddexanka u yahay sharaxaad xoog leh u leh dabeecadda Ilaah - illaa iyo inta aan xadidnayn aadanaha ay fahmi karaan dabeecadda.
Millard Erickson, oo ah fiqi aad loo qadariyo, isla markaana ah borofisar cilmiga fiqiga, ayaa sidoo kale qiraya xadidan. Buuggiisa God in Saddex Qof ("God Saddex Qof") bogga 258 waxa uu tilmaamayaa gelitaanka "jaahil" by aqoonyahan kale iyo u gaar ah:
"[Stephen] Davis wuxuu baaray sharaxaadaha hadda jira ee [Saddexaad] wuxuuna ogaaday inaysan gaarin waxa ay sheeganayaan inay yihiin, wuxuu ahaa qof daacad ah markuu aqoonsaday inuu dareemayo inuu la macaamilayo sirta" , Wuxuu u badan yahay inuu daacad ka yahay inta badan oo inaga mid ah, oo, markii si adag loogu cadaadiyo, inay qiraan inaanan runtii garanaynin sida uu Eebbe mid u yahay iyo sida uu saddex uga duwan yahay. "
Dhab ahaantii ma waxaan fahamsanahay sida Ilaah u noqon karo mid iyo saddex isku waqti? Dabcan maya. Annagu garan mayno wax la taaban karo oo Ilaah ah sida uu isagu yahay. Kaliya khibradeena kuma koobna, laakiin sidoo kale luuqadeena. Adeegsiga ereyga "qof" halkii uu ka imaan lahaa hypostasis ee xagga Ilaah waa tanaasul. Waxaan u baahanahay erey xoojinaya dabeecada Ilaaheena gaarka ahaaneedna wuxuu kujiraa fikirka kala duwanaanshaha. Nasiib darrose, ereyga "qof" sidoo kale waxaa ku jira fikradda ah in la kala sooco marka loo adeegsado dadka. Asxaabtiisu waxay aaminsanyihiin inuusan Eebbe ahayn nooca qof ay koox dad ahi tahay. Laakiin waa maxay qofka "nooca rabaani ah?" Ma hayno jawaab. Waxaan u adeegsanaa ereyga "qof" eray kasta oo Ilaah ka yimid maxaa yeelay waa erey shaqsiyeed, iyo waxkastaba maxaa yeelay Ilaah waa shakhsiyan shaqsiyadiisa sida uu ula dhaqmayo.
Haddii qof diido fiqiga masiixiyadda, asaga ama ayada wax sharax ah ma leh oo ilaalinaysa midnimada Ilaah - taasi waa shuruud buuxda oo kitaabiga ah. Taasi waa sababta ay Masiixiyiintu u dejiyeen caqiidadan. Waxay aqbaleen runta in Eebbe mid yahay. Laakiin waxay kaloo rabeen inay sharxaan in Ciise Masiix sidoo kale lagu sharxay Qorniinka marka loo eego ilaahnimadiisa. Sida tani ay sidoo kale khusayso Ruuxa Quduuska ah. Caqiidada masiixiga waxaa loo sameeyay iyada oo ujeedadu tahay sharraxa, sida ereyada iyo fikradaha aadanaha ay u oggolaadaan, sida Ilaah u noqon karo hal iyo saddex isku waqti.
Sharraxaadaha kale ee dabeecadda Eebbe waxaa la sameeyay qarniyadii hore. Arianism waa hal tusaale. Fikraddan waxay sheegaysaa in wiilka uu ahaa abuur la abuuray si midnimada Eebbe loo ilaaliyo. Nasiib darrose, Arius gabagabadiisu waxay ahayd mid asaas ahaan khaldan sababta oo ah wiilku ma noqon karo abuur la abuuray welina Ilaah buu ahaanayaa. Dhammaan aragtiyaha loo soo bandhigay in lagu sharxo dabeecadda Eebbe marka la eego muujinta Wiil iyo Ruuxa Quduuska ah waxay caddeeyeen oo keliya in aan cilad lahayn laakiin ay tahay in ay cayillan yihiin. Taasina waa sababta caqiidada masiixiga sida sharraxa u ah dabeecadda Ilaah, oo dhawra runta runta maragnimada Baybalka, ay sii jiri jirtay qarniyo.